I-Telegram ye-iOS ibuyekezwa ngesihleli sesithombe nomenzi we-GIF | Ngivela kwa-mac
I-Telegram ye-iOS ibuyekezwa ngesihleli sesithombe nomenzi we-GIF
I-Telegram yethu esheshayo oyithandayo yemiyalezo isanda kuthola isibuyekezo esisha esihlanganisa imisebenzi emibili emisha engaphezu kokuthakazelisa.
Kusukela manje, noma ngubani ovuselela iTelegram kuya enguqulweni engu-3.12 ye-iPhone ne-iPad, uzokwazi ukuhlela izithombe abazokwabelana ngazo ngaphandle kokushiya uhlelo lokusebenza, futhi enze nama-GIF amasha ngendlela elula kakhulu.
1 I-Telegram, iba ngcono
2 Yini okusha kuTelegram?
I-Telegram, iba ngcono
Akungabazeki ukuthi ukuvuselelwa Imilayezo ye-iOS 10 yenze lolu hlelo lokusebenza lwendabuko lwe-Apple lwaba imbangi enkulu ezinkethweni zalolu hlobo, noma kunjalo, I-Telegram isenenzuzo enkulu, futhi lokho kungukuthi i-multiplatform okusivumela ukuthi futhi sixhumane nabasebenzisi bezinye izinhlelo zokusebenza, ikakhulukazi i-Android.
I-Telegram uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo olusheshayo olukhona namuhla. Yebo, ngiyazi ukuthi umbono wami uqobo kodwa iqiniso yilokho inemisebenzi ewusizo kakhulu abanye abaswele, kufaka phakathi uhlelo lokusebenza lwe-Apple Messages kanye ne-WhatsApp enamandla onke. Lapho uqala ukusebenzisa iTelegram ngokujulile ndawonye nabangane bakho nomndeni wakho, uqala ukubamba iqhaza ezingxoxweni zeqembu, uthola iziteshi onentshisekelo kuzo, uzenzele neziteshi zakho, uthola okushiwo ngaphakathi kwamaqembu okuvumela okushiwo umuntu «uthatha kalula, usebenzisa umsebenzi wokuphendula ngqo kumlayezo ngaphakathi kweqembu, nokunye okuningi, kulapho-ke lapho ubona khona ukuthi iTelegram iyona ehamba phambili, futhi ngaleso sikhathi uyazibuza« kungani ngingeke ngibe uqale ukuyisebenzisa ngaphambilini? ».
Yebo, ngaphandle kwezinzuzo eziningi i-Telegram enikela ngazo kunezimbangi zayo eziningi nezinhlobonhlobo, abathuthukisi bayo abayeki, futhi bayaqhubeka nokusebenza njalo ukuze uhlelo lokusebenza luqhubeke nokuzuza emisebenzini nasezimpawu ezenza lube ngcono kakhulu kunalokho eliyikho. ingabe kunjalo. Ngicabanga ukuthi leyo yimfihlo yeTelegram, ukuthi abadali bayo bacabanga ukuthi ingahlala njalo ingcono kunalokho eyikho, futhi ngenxa yalesi sizathu ngaso sonke isikhathi kuba ngcono kancane noma kungenzeka.
Ngemuva kwalo mqulu cishe ongapheli wokuthi bengifisa ukulahla ndawana thile, futhi ngemuva kokuphonsa umbono ku-Apple (ngethemba ukuthi othile eCupertino uzowufunda bese ethatha isinqumo okufanele ngisithathe unomphela), ngizokutshela izindaba ezithi iTelegram isilethela enguqulweni yayo engu-3.12 ye-iOS (futhi-ke, neyabasebenzisi bamadivayisi we-Android).
Yini okusha kuTelegram?
Njengoba sengikutshelile, kunezinto ezintathu ezintsha ezifakwa nokuvuselelwa okusha kweTelegram:
Isihleli esisha sesithombe.
Ukudalwa kwama-GIF enziwe waba ngewakho.
Mhlawumbe into ethakazelisa kakhulu umhleli wesithombe omusha, okuyi ivumela ukufaka amaski ezithombeni zethu ngaphambi kokuwabelana, ukhetha ezinhlobonhlobo eziningi esevele zikhona. Kepha okungcono kakhulu ukuthi njengoba kuyipulatifomu evulekile, singalayisha imaski yethu, uma kwenzeka sizidala noma sizithola ngezinye izindlela. Mane ufake umyalo we- / newmasks ukulayisha imaski yakho.
Mayelana nokusetshenziswa kwezitika, manje sesine- ithebhu yezitika ezifakiwe esingazisebenzisa ngokushesha okukhulu.
Ekugcineni, noma ngikuyekele kwaze kwaba sekupheleni, sinezindaba ezinhle zesibili zeTelegram ye-iOS. Kusukela manje sizokwazi dala ama-GIF ethu, futhi lokhu kuzongezwa kuqoqo elingapheli lama-GIF atholakala kuhlelo lokusebenza.
Ukuze usebenzise lesi sici, kuzokwanela nge qopha ividiyo kusuka kuhlelo lokusebenza uqobo, unakekele ukucindezela inkinobho yokuthula. Ngale ndlela ividiyo esiyirekhodile izokwabiwa njenge-GIF.
Ekuphetheni, iTelegram isisimangazile futhi, ngokuvuselelwa okuhle okuzokwenza izingxoxo zethu zizuze kakhulu emnothweni futhi, nokuthi zizoba mnandi kakhulu futhi zijabulise. Uma ungasayisebenzisi iTelegram, awukwazi ukucabanga ukuthi yini oyilahlekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Pro » I-Telegram ye-iOS ibuyekezwa ngesihleli sesithombe nomenzi we-GIF
Kungani ukhetha i-Apple Watch Series 2 hhayi 1?
INvidia nemidwebo ye-Mac "yezinguquko"